Muxuu yahay kiiska ay Manchester City ku seegi karto ka qeyb galka Champions League-ga? - BBC News Somali
City ayaa wajaheysa inay seegto tartanka Champions League-ga
Kooxda dambi baarista ee xiriirka kubadda cagta Yurub ee Uefa ayaa dooneysa in tartanka horyaallada Yurub ee Champions League-ga laga mamnuuco kooxda Manchester City, haddii lagu helo dambi ah inay ku xad gudubtay xeerarka isticmaalka lacagaha.
Hase ahaatee, waxaa la sheegayaa in go'aanka kama dambeysta ah uu wali gacanta ugu jiro madaxa kooxda baaritaanka oo lagu magacaabo Yves Leterme.
Ninkan oo ah Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Belgium ayaa horkacaya guddiga madaxa bannaan ee Uefa u qaabilsan baaritaannada ku saabsan habka ay kooxuhu u isticmaalaan kharashka soo gala.
Isbuucan gudihiisa ayaa lagu wadaa in go'aan laga soo saaro arrintan, iyadoo markaas la ogaan doono in City ay xilli ciyaareedka soo socda ka qadi doonto ka qeyb galka Champions League-ga iyo in kale.
Go'aanka ku saabsan kiisaska noocan ah ayaan ku xirneyn in loo codeeyo, waana mid si gaar ah uu u leeyahay guddoomiyaha oo kaliya.
Balse qaar kamid ah saraakiisha la shaqeysa ayaa lagu soo warramay inay si adag u qeexeen ra'yigooda ku aaddan in Man City lagu ganaaxo mamnuucis hal xilli ciyaareed ah, taasina ay tahay ciqaabta ku habboon.
City ayaa sanadkii 2-aad oo isku xiga ku guuleysatay horyaalka
Kooxda Manchester City ayaa ugu dambeyn dib ugu guuleysatay horyaalka Premier League-ga ingiriiska.
Manchester City oo ku guulaystay horyaalka Ingiriiska
Hogaamiyaha mucaaradka Uganda oo sheegay in uusan aqbali doonin natiijadii doorashada
TOOS Mareykanka oo ka digay rabshado ka dhaca gobollada ka hor caleemo saarka Biden